Maraykanka oo Kenya ugu deeqay Malaayiin Dollar, si aan loo xirin Xeradda Qaxootiga Soomaalida ee Dhadhaab – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Maraykanka oo Kenya ugu deeqay Malaayiin Dollar, si aan loo xirin Xeradda Qaxootiga Soomaalida ee Dhadhaab
Tan iyo markii uu Madaxweyne-ku-xigeenka dalka Kenya, William Ruto ku dhawaaqay in muddo saddex bilood dib loogu celin doono Qaxootiga Soomaalida ku nool dalkiisa ayaa waxay haatan u muuqataa inay shiiqday go’aankaasi, kadib, markii Dowladda Kenya lagu qanciyey in la siiyo 45 million oo Dollar oo ay wax kaga qabtaan hawlaha Qaxootiga.
Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee dalka Maraykanka, John Kerry ayaa shalay ku dhawaaqay yaboohaasi cusub oo lagu daryeeli doono Qaxooti tiradoodu dhan tahay 600,000 oo qof.
Kerry oo Saxaafadda la hadlay markii uu la kulmay Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay inay Dowladda Kenya kaalin muhiim ah kaga jirto xalinta xiisadaha ka taagan dalalka Somalia iyo Koonfurta Suudaan.
“Kenya waxay ammaan noqon kartaa haddii ay Somalia hesho deganaansho badan” ayuu yiri Kerry oo intaasi ku daray inay Kenya noqon doono ammaan haddii la xaliyo xiisadaha ka aloosan dalka Koonfurta Suudaan.
Waxa u uhoosta ka xariiqay inay Kenya ka taageerayaan La-dagaalanka Alshabaab iyo in si wadajir ah uga shaqeeyaan ammaanka xuduudka, Is-dhaafsiga xogaha Sirdoonka iyo xoojinta sharciga.
John Kerry waxa uu xusay inuu aad uga dheregsan yahay dhibaatooyinka ay Kenya ku hayaan colaadaha Somalia iyo khatarta amaanka ee Qaxootiga, iyadoo 350,000 oo qaxooti Somali ah ku jiraan Xeradda Dhadhaab oo ah tan ugu ballaaran caalamka.
Dhinaca kale, Madaxweynaha Kenya iyo John Kerry ayaa yeeshay Shir socday muddo 90-daqiiqo ah, kaasi oo ay ka qeyb galeen Madax ka kala tirsan labada dhinac.
Sidoo kale, waxay Kenyaati iyo Kerry yeesheen shir khaas ah oo socday muddo 30 daqiiqo, wuxuuna John Kerry kulankaasi ku tilmaamay mid ada u wanaagsan, kuba heshiiyeen dhowrista xuquuqda Aadanaha iyo Istaraatijiyadda La-dagaalanka Kooxaha loogu yeero Argagixisadda.
Kumanaan Tahriibayaal ah oo maanta gaaray Dekedda Pozzalo ee dalka Talyaaniga